Tale jeneralin’ny Bianco, Andriamifidy Jean Louis : « Tsy mitombina ny fitakiana ny fialako… » | NewsMada
Tale jeneralin’ny Bianco, Andriamifidy Jean Louis : « Tsy mitombina ny fitakiana ny fialako… »
Nitondra fanazavana momba ireo raharaha samihafa, idiran’ny Bianco ny tale jeneraly Andriamifidy Jean-Louis, omaly teny Ambohibao. Anisan’izany ny « Raharaha Ambohimahamasina », ny fitsarana ny andramena any Singapour, ny fanambaram-pananan’ny depiote ary koa ny volaben’ny Frankofonia.
Nitondrany valin-kafatra amin’ny fanehoan-kevitry ny loholona Andriamanadavy Riana, afakomaly teny Anosikely mitaky ny tokony hialan’ny ny tale jeneralin’ny Bianco, Andriamifidy Jean-Louis. « Resaka tsy mitombina izany ka tsy valiko akory », hoy izy. Na izany aza, nitondrany fanazavana ny momba ny raharaha maha voarohirohy ny ben’ny Tanànan’Ambohimahamasina. « Efa nandefasana fiantsoana fanindroany izy fa tsy tonga… ka nidina tany ny mpanao famotorana ary efa hiakatra aty rahateo izy ka nentina… Tsy misy resaka tsiambaratelo ny fisamborana na koa ny fiantsoana ary tsy misy filazana ny momba ny antontan-taratasy… Any amin’ny famotorana sy ny teniny rehetra vao arovana ny tsiambaratelon’ny fanadihadiana… Tsy midika ho efa voaheloka avy hatrany ny nampiakarana azy aty », hoy izy nanazava. Nohitsiny fa tsy manameloka olona ny Bianco. Anjaran’ny fitsarana izany, araka ny nambarany. « Manamarina izahay hoe mitombina sa tsia noho ny ahiahy », hoy ihany izy.
Miandry ny alalana avy any amin’ny fitsarana
Momba ny olona iray nampanantsoina kosa, nambarany fa efa lasa any amin’ny « Chaine pénale » (CPAC) ny raharaha satria tsy afa-nitazona andro maromaro, araka ny voalazan’ny lalàna ny ben’ny Tanàna intsony ny Bianco sady tsy tonga mihitsy na efa nantsoina fanindroany aza. Tsy tonga anefa izy ka tsy maintsy nofaranana ny raharaha. « Tsy manana fahefana haka olona intsony izahay raha tsy misy alalana avy amin’ny fitsarana, vao afa-manohy ny famotorana indray avy eo ka miandry isika », hoy ny Bianco. Tsiahivina rahateo fa hiakatra fitsarana, anio raha tsy misy ny fiovana ity « Raharahan’Ambohimahamasina » ity.
Nitondrany fanazavana ny raharaham-pitsarana ny andramena naondrana an-tsokosoko tany Singapour. Anisan’ny efa tany an-toerana rahateo ny tenany ka nilazany fa efa mandeha ny fanadihadiana. « Mitady ny porofo isika satria nampiasa hosoka avokoa ireo nanao izany. Tsy nandalo ladoany na seranana ny andramena… Hojerenay ny kaonty nametrahana ny vola sy iza ireo olona ireo. Efa misy olona tokony hohenoina saingy misy ny sakana… Efa mitady ny hamahana izany izahay izao », hoy ihany ny tale jeneraly.
Anjaran’ny IGE ny momba ny Frankofonia
Ankoatra izany, nambarany fa mbola 53 % amin’ireo depiote no nahavita ny fanambaram-pananana ho an’ny taona 2016. Niaiky ny tenany fa mbola misy hevitra tsy itoviana eo amin’ny Bianco sy ny HCC momba ny fanamarinana ny fananan’ireo olobe ireo. « Eo am-pamolavolana ny didy fampiharana afahana mandrindra izany izahay. Ohatra, tsy ilaina intsony ny zo tsy azo anenjehana ny depiote raha ny momba io fanambaram-pananana io… », hoy ny Bianco.
Nitondrany fanazavana koa ny fanehoan-kevitry ny fiarahamonim-pirenena amin’ny mety fisian’ny kolikoly na resaka namana tamin’ny tsenan’asam-panjakana ho an’ny Frankofonia teo. « Mametraka ny ahiahiny izy ireo, niainga amin’ny mason-tsivana maromaro. Izahay anefa tsy rafitra mpanao fanadihadiana fa anjaran’ny mpisafondraharaham-panjakana (IGE) na koa ny fitsarana momba ny vola (cours de comptes) ny manamarina ny vola. Tsy miditra izahay raha tsy efa tena misy ilay izy. Tsy mbola nahazo fitarainana koa ny Bianco », hoy Andriamifidy Jean-Louis.
Manoloana ireo rehetra ireo, nambarany fa ilaina ny fanabeazana sy ny fanovana toe-tsaina mba hipetrahan’ny fitiavan-tanindrazana, manoloana ny ady atao amin’ny kolikoly.